Umzi-mveliso wobuNjineli kunye noYilo, ababoneleli-abaVelisi-ubunjineli baseTshayina kunye nabaVelisi boYilo
ULondolozo lwePlastiki lokungunda
ukugcinwa kokungunda kweplastiki Ukugcinwa kokungunda kubaluleke ngaphezu kokulungiswa kokungunda. Amaxesha amaninzi okugcinwa komngundo, ubomi bawo bufutshane.Xa isikhunta sigcinwa ngcono, ubomi benkonzo buya kuba bude.Ukugcinwa kokungunda kwahlulwe kakhulu ngamanqaku amathathu; 1. Ulondolozo lwemihla ngemihla lokungunda: zonke iintlobo…
Ababoneleli bokwenza umngundo
Siyenye yeemveliso zeplastiki zobuchwephesha ezenza kunye nokwenza umngundo suppliers.We zikhethekileyo ekwenzeni zonke iintlobo zemveliso yeplastiki, sikwabonelela ngoyilo lokungunda, ukwenza inkonzo. Sikulo mgca kwi-15 leminyaka, sinokukunceda uyile kwaye uphuhlise iimveliso zakho ezintsha,…
Isitofu sokubumba uMbumba uyilo
I-JS MOLD Mold ineqela loyilo lwesixhobo sokubumba esityebileyo esinamava-ekwaziyo ukunciphisa iindleko ezibandakanyekayo kuyilo lwesixhobo kunye nenkqubo yokuvelisa ngelixa uvelisa iindawo ezikumgangatho ophezulu-kunokuthetha umahluko phakathi kwempumelelo kunye nokusilela kwiprojekthi yakho. I-JS MOLD Mold lishishini...
Umngundo wePlastiki ochanekileyo
I-JS MOLD Mold ibonelela ngokuchaneka ngokwesiko kwePlasitiki yokubumba iiNkonzo, inkqubo yethu yokwenza isitofu sokungunda yinkqubo yobunini egxile ekufezekiseni impumelelo enkulu kwisigaba ngasinye soyilo lokungunda, uhlalutyo, imveliso, ukuzama, kunye nemveliso yokubumba isitofu eyenziwa liqela elityebileyo lamava. usebenzisa...